अनलाइन सहयोगी भौतिक सङ्घर्ष - हरेक दिन आध्यात्मिकताको पुनरुत्थान
एडवेंटिस्ट मौलिक मिल्दो अनलाइन
हरेक दिन आध्यात्मिकताको पुनरुत्थान
विन्डोजको लागि जीवन
भक्ति बच्चाहरु - I
भित्री बालबालिका - II
बाल भक्ति - III
उहाँको वचनद्वारा पुनर्जीवित भयो
वेबसाइट रेडियो कोड
हमसे संपर्क गर्नुहोस |
हाम्रो वेबसाइट मननका ब्रन्च एडभेन्टिस्ट अनलाइन स्वागत!
द्वारा: - चाहे anglers बास Guandu / ते - Thiago Amaral de Oliveira अप्रिल 21 2018 / सम्पर्क भएकोले: (027) 99777-2514 - Vivo / (027) 98155-2234 - टिम
मा प्रकाशित 12 2018 सेप्टेम्बर द्वारा ध्यान
2019 युवा प्रेरणा - जीवित प्रकृति
मा प्रकाशित 22 अगस्ट 2018 द्वारा ध्यान
2001 युवा प्रेरणा पास्ता र पत्रकारिता फ्रान्सिस्को लेमोस को प्रकृति को एक मित्र हो र उनको पाठ को अविश्वसनीय शोधकर्ता हो। उनी इवासोना, बियामा जन्मिए, र विशेष ध्यान दिए
सानो उत्सुक - 2019 बच्चाहरु को भक्ति
मा प्रकाशित 22 अगस्ट 2018 22 अगस्ट 2018 द्वारा ध्यान
संसारमा धेरै रोचक र उत्सुक चीजहरू छन् जुन परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुभयो। उदाहरणका लागि, किन तपाईंको कपाल तपाईंको सानो साथीको कपाल जस्तै होइन? तिनीहरू कहाँ देखिन्छन्
2019 महिलाहरु को ध्यान - हाइलाइटहरू
के तपाईंले जान्नुभयो कि परमेश्वरले तिम्रो साथ कम्पन दिनुहुन्छ? केवल तिमीहरूको सोचाइ, उहाँ आनन्दका साथ आनन्दित हुनुहुन्छ। यो भक्तिलाई कथाहरू भरिएको छ जुन सुन्दर बांडको बीचमा मनाईन्छ
2019 दैनिक ध्यान - हाम्रो आशा
मा प्रकाशित 22 अगस्ट 2018 29 अगस्ट 2018 द्वारा ध्यान
आशा सपनाको जागिर हो। यो एक वादा फल हो, हृदयको माटो मा लगाएको बीउ विश्वासको साथ फ्याँकिन्छ। आशाले हाम्रो आँखा अगाडि बढ्यो,
हरेक दिन पत्ता लगाउनुहोस् कि परमेश्वरले तपाईंलाई भन्नु भएको छ! तपाईंको भक्तिलाई पहिले नै ग्यारेन्टी दिन्छ। फेसबुक टिप्पणीहरू
2018 - येशूसँग बढ्दै
मा प्रकाशित 21 अप्रिल 20184मई 2018 द्वारा ध्यान
लगभग हरेक बच्चा ठूलो हुन चाहन्छ। निस्सन्देह, तपाईं पनि बढ्न चाहानुहुन्छ। तर राम्रो कुरा हो जब हामी सबै पक्षमा बढ्छौं। बाइबल भन्छिन्
2018 - सानो उत्सुक
2018 सूर्यास्त ध्यान
सूर्यको लागि ध्यान सब्बथ प्राप्त गर्न अयोग्य तत्वको रूपमा पछिल्लो वर्ष स्थापना गरिएको छ। कुनले योगदान गरेको छ त्यसो भए प्रत्येक
सर्वश्रेष्ठ समय को लागि - 2018
मा प्रकाशित7अप्रिल 20184मई 2018 द्वारा ध्यान
2018 मा परिवारको आध्यात्मिकतालाई सुदृढ पार्ने नयाँ भक्तिहरू जान्न पाउनुहोस् विजयी क्रिश्चियन जीवनको बाटो परमेश्वरको साथ दैनिक संगतिमा सुरु हुन्छ। मद्दत गर्न
युवा प्रेरणा - राम्रो तरिकाले सोच 2018
मा प्रकाशित 28 फेब्रुअरी 20184मई 2018 द्वारा ध्यान
हामी सबै के गर्नु हाम्रो विचारको परिणाम हो। त्यसोभए, सोच्ने सोचले सफलताको रहस्य हो। सुलेमानले पृथ्वीमा बुद्धिमानी व्यक्तिलाई यो थाहा थियो। परमेश्वरले दिनुभएको निर्देश,
महिलाको ध्यान 2018 - अनन्त प्रेम
जीवनका थुप्रै पक्षमा परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रह अनुभव गरेका महिलाहरु द्वारा लिखित भक्ति। र तिनीहरू तपाईं संग अद्भुत भावना को साझा गर्न चाहन्छन
2018 दैनिक ध्यान - एक अविस्मरणीय दिन
केही दिनको लागि सधैँ जीवनको चिन्ह लगाउँदछ, तिनीहरू अस्तित्वको नदीको बत्ती हुन्। यदि जीवन एक पर्खाल थियो भने दिनहरू यसको ईंटहरू हुनेछन्। इतिहासको महान पर्खालमा
नवीनतम साइट अपडेट
अब प्ले गर्दै
तहहरू Devocionais 2019
गाइडनको 300 समूह पृष्ठमा छोटो
रेडियो युवा आशाको आनन्द लिनुहोस्
छोटो सब्बात विद्यालय पोर्टल
द्वारा वितरित WordPresseDonovan.